Kudzidza & Dzidzo - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Kudzidza & Dzidzo
Sezvo maapplication eIOS uye matekinoroji matsva atora pasirese, haichisiri nhau. Yakapararira kuburikidza nehupenyu hwedu, uye chikamu chedzidzo hachina kubatika kubva kumusika uri kuwedzera weapadappapps, mac maapp, uye mapiritsi mapurogiramu edzidzo. Iko kukanganisa kweaya maapplication edzidzo akasimba kwazvo. Vadzidzi pamwe nevadzidzisi vanowana kubatsirwa kubva kune izvi zvinoshandiswa nhasi kuchengetedza nguva nekuedza. Kwete izvi chete, zvinowedzera nekusimudzira zviitiko zvavo zvekudzidza futi. Nzira dziri nani dzekudzidza nekupa zivo dziri kuvhurika kuburikidza nemaapps, izvo zvinowedzera zvakanyanya ruzivo rwekudzidza zvisati zvamboitika.
Newgenapps inoratidzira huwandu hwesoftware dzedzidzo kuita kuti ruzivo rwekudzidza rukoshe uye runakidze. Isu tinokudziridza ekudzidza uye ekudzidzisa maapplication ayo ari nyore kushandisa, kunyanya kune vana, uye anogona kushandiswa kubva chero kupi pane chero chinhu chinhu.
Maapplication edu edzidzo anogona kukubatsira munzira dzinotevera:
1. Yakadzika-basa manejimendi maapplication
2. Magazini enhau
3. Kunze kwekutsvaga pamapeji ewebhu akachengeterwa kushandiswa kwekupedzisira
4. Zvirongwa zvinokubatsira kuchengetedza pfungwa dzako, uye kugara wakarongeka
5. Nguva yekushandisa maapplication
6. Kupinda Tracker
7. Mudzidzi Information System
8. Cloud Computing mabasa